ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): သမီးအတွက်ကဗျာတစ်ပုဒ်
ကျွန်မလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကျွန်မမွေးစားဖေဖေ ( ကလောင်အမည် - ကိုမွှေး ) က ကျွန်မမေးလ်ထဲကို ဒီကဗျာလေး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မဖတ်ပြီးချိန် စိတ်ထဲအများကြီး ခံစားရသလို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိတယ်။
ကျွန်မသွားနေတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကြောင်းမှာ အရေးပါဆုံးလူတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မမွေးစားဖေဖေကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ အမြဲတမ်း အားပေးပြီး သွန်သင်ပြသဆုံးမပေးတဲ့ မွေးစားဖေဖေစေတနာတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘဲ ကျွန်မ အမြဲတမ်းဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာကို ပြောလိုပါတယ်။
လူဆိုတာ ရခဲတဲ့ လူ့အဖြစ်ကို
မတုန့် မလှည့် မတွေဝေ
သချို င်္င်းမြေ ချဲ့ ကြစမ်းပါစေ
Click Here To Read This Poem In Burma Today
This is great poem. Sometime, kind of that poems are stronger than modern. Thank you for your post.